Hongria: Tafatafa miteraka adihevitra niarahana tamin’ny Mpitarika Kaominista teo aloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2010 16:38 GMT
Efa nanoratra momba ilay sarimihetsika mampiady hevitra izahay,mitondra ny lohateny hoe Guilt and Impunity, novokarina mpanao gazety Hongroà roa, izay nitafatafa tamin'ny Minisitry ny Atitany teo aloha, Béla Biszku. Nanomboka tamin'ny tetezamitan'ny 1989, tsy niresaka tamin'ireo mpanao gazety mihitsy izy ankoatra an'i Fruzsina Skrabski sy i Tamás Novák, mpitoraka blaogy sady mpanao gazety ao amin'ny Mandiner (HUN) izay niezaka ny nifandray taminy hitafatafa aminy ka nilazany fa avy amin'ny tanàna nahaterahany, Márokpapi, koa ry zareo ary manomana alimanaka ho an'ireo olo-malaza teraka tany.
Satria mitohy ny adihevitry ny olona momba ny Guilt and Impunity, hita fa liana sy te-hahafantatra momba ny andraikitr'i Biszku ary miantso azy hanazava ny anjara asany fizarana vola tamin'ireo nanohitraizay nandray anjara tamin'ny revolisiona 1956.
Tamin'ny Alatsinainy, ny Duna TV, fahitalavi-panjakana no nandefa ny tafatafa niarahana tamin'ny Béla Biszku (HUN). Talohan'ny resaka tamin'ilay Minisitra teo aloha, i Kata Apáti-Tóth, mpanao gazetin'ny Duna TV dia nanoritra tsara fa “ilay tafatafa dia efa nisy fifanekena mialoha voafaritra tsara.”
Béla Biszku dia namerina ireo fanambaràna nataony tao amin'ny Guilt and Impunity: tsy manenina tamin'ny fihetsiny sy tamin'ny fanapaha-kevitra noraisiny tamin'izy tompon-andraikitra izy. Mbola raisiny ho fanoherana-ny-revolisiona foana ny revolisiona tamin'ny 1956, ary araka ny nolazainy, ireo herisetra rehetra nataon'ny governemanta tamin'izany fotoana izany dia voamarina satria niaro ny rafitra politika izy ireo. Niteny tamin'ilay mpanao gazety izy fa vonon-kanampy ny ekipana mpahay tantara raha nanao fanadihadiana momba ny fiomanana nataon'ny Antokon'ny Mpiasa Sosialista Hongroà talohan'ny tetezamita izy ireo.
Taorian'ny famoahana ny Guilt and Impunity, nanontany (HUN) ilay antoko farany havanana “Jobbik” raha mbola nahazo vola fisotroan-dronono matetivetina avy amin'ny fanjakàna i Béla Biszku—izay monina any amina fokotany manan-karena any Budapest (Rózsadomb)—noho ny naha-mpanao politika goavana azy fotsiny. Nolaviny ny filazàna azy ho nahazo fisotroan-dronono matevina .
Kettős Mérce dia naneho hevitra momba ilay horonantsary momba an'Atoa Biszku, ary nanoratra lahatsoratra momba ny tafatafa tamin'ny Duna TV koa. Ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Namana Biszku sy ny fotoana be mpijery” (HUN), dia mitsikera mafy ny fisian'olona izay mivandravandra ny heloka vitany nefa afa-manazava izany amina fandaharana fahitalavim-panjakana: